ထိရောက်သောကမ်းတက်စာမျက်နှာများတည်ဆောက်ရန်အဆင့် ၈ ဆင့် Martech Zone
အဆိုပါ ဆင်းသက်စာမျက်နှာ သင်၏ဖောက်သည်များ ၀ ယ်သူ၏ခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးမည့်အဓိကအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အတိအကျကဘာလဲ? ပိုအရေးကြီးတာကသူကသင့်စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုကြီးထွားစေနိုင်မလဲ။
အတိုချုပ်ဖြစ်ရန် ထိရောက်သောဆင်းသက်စာမျက်နှာ ဖောက်သည်များကိုအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်စာရင်းတစ်ခုသို့စာရင်းသွင်းရန်၊ လာမည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကန ဦး ရည်မှန်းချက်မှာကွဲပြားနိုင်သော်လည်းရလဒ်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုငွေပေးချေတဲ့ဖောက်သည်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ပါ။
landing page ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုပါစို့ ဆွဲဆောင်မှုကို web ဒီဇိုင်းကိုဖြေရှင်းချက်။ သင်၏ landing page ကိုမတွန်းလှန်စေရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အဆင့်များဖြစ်သည်။
အဆင့် ၁။ သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုသတ်မှတ်ပါ
သင်စတင်ရေးသားခြင်းမပြုမီသင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြံဥာဏ်ရှိသင့်သည်။ အသက်၊ ကျား၊ မပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ လစဉ် ၀ င်ငွေစသည်တို့နှင့်ပါတ်သက်သည့်အချက်အလက်များပေးခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုဖန်တီးပါ။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ မင်းရဲ့သတင်းစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အောင်၊ တိကျတဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့သင့်ထုတ်ကုန်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြနိုင်မှာပါ။ သင်၏ပရိသတ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးနောက်ခြေလှမ်းသို့သွားပါ။
အဆင့် ၂ - အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဥပဒေကိုအသုံးပြုပါ
လူမှုစိတ်ပညာရှင်တွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ပေးရင်ကြင်နာမှုနဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ အခမဲ့နမူနာများ၊ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုသို့မဟုတ်ရိုးရိုး copywriting checklist ပင်ကုမ္ပဏီများသည်ဤနည်းဗျူဟာကိုထိရောက်စွာအသုံးချရန်အသုံးပြုသောလက်ဆောင်များသာဖြစ်သည်။
သင်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါစို့ ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏အီးမေးလ်ကိုရယူပါ သို့မဟုတ်သူတို့ကိုစာပို့စာရင်းသို့စာရင်းသွင်းပါ။ သူတို့ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်တန်ဖိုးရှိသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုသူတို့အားသင်ကတိပေးနိုင်သည်။ ပြီးတော့မင်းကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်၊ မင်းပေးနေတဲ့အရာတွေကပိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ယူဆလိမ့်မယ်။
လှမ်း ၃: ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစီးနှင့်ခေါင်းစဉ်ငယ်ကိုရေးပါ
တစ် ဦး ခေါင်းစဉ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကို ၀ ယ်ရန်သင်၏အဓိကချိတ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းသော ဦး ခေါင်း -turner ။ သင်၏အချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်တိကျစွာဖြတ်ကျော်ရန်လိုသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး နေရန်နှင့်ပိုမိုသိရှိရန်သင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။
နှစ် ဦး စလုံးရေးနေစဉ်တွင်သင့် feature ကိုအကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်ပြောင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရှည်လျားသောဘက်ထရီသက်တမ်းရှိသောစမတ်ဖုန်းကိုရောင်းလျှင်၎င်း၏ mAh (milliampere-hour) အကြောင်းမပြောပါနှင့်။ အဲဒီအစား“ ပြောရရင်သင်အကြိုက်ဆုံး Netflix ပြပွဲကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်ပါ။ ” ဤနည်းဖြင့်ထုတ်ကုန်သည်သင်၏ပရိသတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဘ ၀ အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်နာကျင်မှုအချို့ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ကြောင်းသင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆင့် ၄ - လူမှုအထောက်အထားပြပါ
သုံးစွဲသူ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်
ထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များထံမှထောက်ခံချက်များရယူပြီးသင်၏ပြောင်းလဲမှုနှုန်းတက်လာသည်ကိုကြည့်ပါ။ ပြီးနောက်မှာလူတွေကနွားတွေနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ ထိုအပင်သည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောအခါ၊ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်အတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ၅ - Vistors ၏နာကျင်မှုအချက်များနှင့်၎င်းတို့ကိုသင်မည်သို့ဖယ်ရှားသည်ကိုဖော်ပြပါ
သင်ကလေ့ကျင့်သူများအတွက်အိမ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုသင်ရောင်းနေသည်ဆိုပါစို့။ ဤနေရာတွင်သင်၏နာကျင်မှုအချက်တစ်ခုမှာသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သူတို့၏အလေးချိန်မှပေါ်ပေါက်လာသည့်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အ ၀ တ်အထည်များမှာအဆင်ပြေချောမွေ့စွာနေထိုင်နိူင်ပြီးဒါကသူတို့ရဲ့လူမှုဘ ၀ ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
ယခုသင်၏အလုပ်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဤနာကျင်မှုအမှတ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်မြေပေါ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ခေါင်းစီးသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် -
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်ပုံဆွဲပါ။ Or ထိုကမ်းခြေကိုနွေရာသီအတွက်အဆင်သင့်ထားပါ။
ဤအိမ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်သည်သင့်အားပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆေးဝါးများ၊ သင်လိုအပ်သမျှသည်အချိန်၊ စေ့ဆော်မှုနှင့်တစ်သမတ်တည်းကြိတ်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။
အဆင့် ၆ - လှုပ်ရှားမှုခေါ်ဆိုမှုသို့တိုက်ရိုက် itors ည့်သည်များ
အထက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းပြီးပါက Call to Action ကိုဖန်တီးရန်အချိန်တန်ပါပြီ။ ၎င်းသည်တိုတို၊ မြင်နိုင်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောဘာသာစကားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအနေနဲ့အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုလိုက်လုပ်ကြရအောင်။
အဲဒီအစားယေဘုယျအဘို့အဖြေရှင်းခြင်းထက် တင်သွင်း သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ရဖို့အတွက်ခလုတ်နှိပ်လိုက်ပါ၊ သင်္ဘောသားနဲ့ဆက်သွယ်ပါ or ဒီအဆီကိုယနေ့စတင်လောင်ပါ။ ဖောက်သည်အားတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုရန်လုပ်ဆောင်ချက် (CTA) သို့ ဦး တည်ရန်ဆွဲဆောင်သောဂရပ်ဖစ်များကိုလည်းအသုံးပြုသင့်သည်။ ဒါ့အပြင်ခြားနားတဲ့အရောင်များကိုကူညီပါ ခလုတ်ကိုထွက်မတ်တပ်ရပ်စေ.
အဆင့် ၇: စမ်းသပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း…အရာအားလုံး
သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်သင် A / B စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဇိုင်းရှုထောင့်၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာလုံးများ၊ ခေါင်းစီးများ၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်များ၊ ပုံများ၊ ခလုတ်များ၊ Landing Page မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းဗျူဟာမရှိပဲဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။
မတူကွဲပြားသော ၀ ယ်ယူသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုစာမျက်နှာများစွာစမ်းသပ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ B2B နည်းဗျူဟာဆိုလျှင်သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်မည့် landing page တစ်ခုရှိလိုပေမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စားသုံးသူကို ဦး စားပေးသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာဖြစ်လျှင်၊ အသက်၊ ကျား၊ မ၊ တည်နေရာအားဖြင့်အကြောင်းအရာနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပေမည်။
အဆင့် ၈။ ကမ်းတက်စာမျက်နှာပလက်ဖောင်းကိုသုံးပါ
ထိရောက်သောဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်သင့်တော်သောဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်များစွာမလိုအပ်ပါ။ အလွယ်တကူပုံတူပွားခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်လှပသောဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ရန်စာမျက်နှာ၏ဖြေရှင်းချက်များကသင့်အားအထောက်အကူပြုသည်။
ထွက်ခွာသည် Instapage, ဤဆောင်းပါးမှအကြံပြုချက်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်သင့်အားခွန်အားပေးမည့်အလွယ်တကူဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Trial ကိုစတင်ပါသို့မဟုတ် Instapage ၏သရုပ်ပြကိုရယူပါ
အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များမှ Raving ပရိသတ်များအထိ
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာသည်သင်၏ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ အထက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာ၏ထိရောက်မှုကို get-go မှတိုးမြှင့်လိုက်ပြီးချိန်ညှိချိန်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ အခြားအရာအားလုံးထက်တန်ဖိုးကိုအမြဲတမ်းထားရန်သတိရပါ။ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုအချိန်တိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မည်။
ထုတ်ဖော်: Martech Zone တစ် ဦး Affiliate ဖြစ်ပါတယ် Instapage!